IPO(IPO) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओ आज शुक्रबार बाँडफाँड गरिएको छ। धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको काठमाण्डौ नक्सालस्थित कार्यालयमा बिहान ९ बजे आयोजित कार्यक्रमबीच आईपीओ बाँडफाँड गरिएको हो। मागभन्दा बढी आवेदन परेका कारण आईपीओ गोलाप्रथाबाट बाँडफाँड गरिएको छ। यो आईपीओमा कुल २२ लाख ५५ हजार ८४ आवेदकबाट २...
सामलिङ्ग पावरको आईपीओ पहिलो दिन नै ७.८३ गुणाले ओभरसब्सक्राइब्ड, कतिले भरे ?
काठमाण्डौ । सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ पहिलो दिन नै ७.८३ गुणाले ओभरसब्सक्राइब्ड भएको छ। आज कात्तिक ४ गतेबाट यो कम्पनीको प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यका ७ लाख ३० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन भएको छ। कुल कित्तामध्ये २ प्रतिशत अर्थात १४ हजार ६०० कित्ता सेयर कर्मचारीका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात ३६ हजार ५०० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी...
न्यादी हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँड भोलि, झन्डै साढे २१ लाख आवेदकले सेयर नपाउने
काठमाण्डौ । न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओ भोलि शुक्रबार बाँडफाँड हुने भएको छ। बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका अनुसार काठमाण्डौको नक्सालस्थित क्यापिटलकै कार्यालयमा आईपीओ बाँडफाँड हुनेछ। आईपीओ बाँडफाँड कार्यक्रम बिहान ९ बजे हुनेछ। यो कम्पनीले गत असोज १५ गतेबाट १०० अंकित दरका कुल २२ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ...
सामलिङ्ग पावरको आईपीओमा आवेदन खुला
काठमाण्डौ । सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेडको आईपीओमा आज कात्तिक ४ गतेबाट आवेदन खुला गरिएको छ। कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यका ७ लाख ३० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको हो। कुल कित्तामध्ये २ प्रतिशत अर्थात १४ हजार ६०० कित्ता सेयर कर्मचारीका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात ३६ हजार ५०० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ।...
ईङवा हाइड्रोले १९.६० लाख कित्ता आइपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट
काठमाण्डौ । ईङवा हाइड्रोपावर लिमिटेडले १०० रुपैयाँ अंकित दरका १९ लाख ६० हजार कित्ता साधारण सेयर निश्कासन गर्ने भएको छ । ती साधारण सेयरको सार्वजनिक निश्कासनका लागि कम्पनीले निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रुपमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिङ्ग लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । ईङवा हाइड्रोपावर लिमिटेडको रजिष्टर्ड कार्यालय, काठमाडौं...
काठमाण्डौ । मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ अर्को साता बाँडफाँड हुने भएको छ । बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका अनुसार यो कम्पनीको आइपीओ अर्को साता बाँडफाँड गर्ने गरी आवश्यक तयारी थालिएको छ । 'संभवत शुक्रबारसम्म प्रिअलटमेन्ट होला ।' क्यापिटलका सीइओ पारसमणि ढकालले भने-'सञ्चयकर्ताको दोहोरो आवेदन परे...
अन्तिम दिनसम्म मध्य भोटेकोशीको आईपीओ ४.५६ गुणाले ओभरसब्सक्राइब्ड
काठमाण्डौ । मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ निष्कासनको अन्तिम दिनसम्म ४.५६ गुणाले ओभरसब्सक्राइब्ड भएको छ। कम्पनीले गत आसोज २० गतेबाट कुल ९० करोड रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको थियो। जसअनुसार कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ९० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको थियो। यो आईपीओमा आज बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन...
काठमाण्डौ । मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज असोज २५ गते अन्तिम दिन रहेको छ। कम्पनीले गत आसोज २० गतेबाट कुल ९० करोड रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको छ। जसअनुसार कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ९० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको छ। यो आईपीओमा आज बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिने धितोपत्र बिक्री...
अहिलेसम्म मध्य भोटेकोशीको आईपीओमा कति पर्यो आवेदन ? भोलिसम्म छ भर्ने म्याद
काठमाण्डौ । मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आईपीओमा आइतबार (असोज २४ गते) सम्म ४ गुणा बढीले ओभरसब्सक्राइब्ड भएको छ। कम्पनीले गत आसोज २० गतेबाट कुल ९० करोड रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको छ। जसअनुसार कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ९० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको छ। कुल निष्कासन हुने कित्तामध्ये ३ लाख ६० हजार...
मध्य भोटेकोशीको आईपीओ अहिलेसम्म २.८८ गुणाले ओभरसब्सक्राइब्ड
काठमाण्डौ । मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको दोस्रो चरणको आईपीओ निष्कासनको तेस्रो दिन शुक्रबारसम्म २.८८ गुणाले ओभरसब्सक्राइब्ड भएको छ। कम्पनीले गत (आसोज २० गते) बाट कुल ९० करोड रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको छ। जसअनुसार कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ९० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको छ। कुल निष्कासन हुने...
बुद्धभूमि नेपालको आईपीओ बाँडफाँड, यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा
काठमाण्डौ । बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ शुक्रबार बाँडफाँड गरिएको छ। धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केटको काठमाण्डौ सुन्धारास्थित कार्यालयमा आज बिहान ११ बजे एक कार्यक्रमबीच आईपीओ बाँडफाँड गरिएको हो। मागभन्दा बढी आवेदन परेको यो आईपीओ गोलाप्रथाबाट बाँडफाँड गरिएको छ। कम्पनीले गत असोज ११...
सामलिङ्ग पावरको आईपीओ कात्तिक ४ बाट निष्कासन हुने
काठमाण्डौ । सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेडले आगामी कात्तिक ४ गतेदेखि ७.३ करोड रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यका ७ लाख ३० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो। कुल कित्तामध्ये २ प्रतिशत अर्थात १४ हजार ६०० कित्ता सेयर कर्मचारीका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात ३६ हजार ५०० कित्ता सेयर सामूहिक...
आईपीओ निष्कासन गर्दै मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, बिक्री प्रबन्धकमा मेगा क्यापिटल
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। वि.सं. २०७५ सालमा १ अर्ब अधिकृत पुँजी र ४० करोड जारी पुँजीसहित स्थापना भएको कम्पनीले १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको थियो । सोहीअन्तर्गत सर्वसाधारणका लागि रु. ४ करोडबराबरको ४ लाख कित्ता आईपीओ कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको...
सामलिङ्ग पावरको पहिलो चरणको आईपीओ बाँडफाँड
काठमाण्डौ। सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेडले पहिलो चरणमा आयोजनाबाट अति प्रभावितका लागि निष्कासन गरेको आईपीओ आज बाँडफाँड गरिएको छ। धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच आईपीओ बाँडफाँड गरिएको हो। कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना अति प्रभावित क्षेत्र ईलाम नगरपालिका वडा नं. ८ र १०...
मध्य भोटेकोशीको आईपीओ पहिलो दिनै १.०८ गुणाले ओभरसब्सक्राइब्ड, कति पर्यो आवेदन ?
काठमाण्डौ । मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको दोस्रो चरणको आईपीओ निष्कासनको पहिलो दिन नै ओभरसब्सक्राइब्ड भएको छ। कम्पनीले आज (आसोज २० गते)बाट कुल ९० करोड रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको छ। जसअनुसार कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ९० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको छ। कुल निष्कासन हुने कित्तामध्ये ३ लाख ६० हजार...
कृषि विकास बैंकको डिबेन्चर रजिस्ट्रारमा एनआईबिएल एस क्यापिटल नियुक्त
हिरो मोटोकर्पको नयाँ ‘कनेक्ट’ माएस्ट्रो एज ११० सार्वजनिक, कति पर्छ मूल्य ?